Nahazoana alalana ny fambolena rongony any New York - Famaritana sy fepetra takiana
Fahazoan-dàlana amin'ny fambolena marijuana any New York
Fahazoan-dàlana mamboly rongony any New York
Ny fahazoan-dàlana New York Cannabis Cultivation dia iray amin'ireo karazana fahazoan-dàlana folo tafiditra ao anaty lalàna vaovao natolotra.
Mety ho ity ny taona nanamafisana ara-dalàna ny marijuana tany New York. Tamin'ny 6 Janoary, natolotra ny Antenimieran-dehiben'ny New York i Bill S854. Ity volavolan-dalàna ity dia mikendry ny hametraka ny “Lalàm-panorenan'i Marihuana sy ny hetra”, izay hametraka lalàna - anisan'ny zavatra hafa- momba ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana.
Na dia mbola ao amin'ny komitin'ny loholona aza izany fihetsika izany dia misy olona sasany, ao anatin'izany ny governora Andrew Cuomo, no hita fa tena manantena fa ho tanteraka tsy ho ela ny fanarahan-dalàna ny rongony ampiasan'ny olon-dehibe. Amin'io lafiny io dia zava-dehibe ho an'ny olona maniry hiditra amin'ny indostrian'ny rongony any New York ny manomboka miomana ny tenany.
Ny "Lalàna mifehy sy mandoa hetra ao Marihuana" dia misy andininy fahazoan-dàlana 10 fahazoan-dàlana hampiasan'ny olon-dehibe XNUMX. Raha te hamaky momba ny fomba fangatahana iray amin'ireo lisansa ireo ianao dia tokony hijery ny "Fampiharana mari-panafarana rongony any New York”Mandefa momba izany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny fahazoan-dàlan'ny mpamboly ampiasain'ny olon-dehibe izahay izay hamela ny fambolena rongony any amin'ny fanjakan'i New York araka ny lalàna napetraky ny lalàna.
Inona no fahazoan-dàlana mamboly rongony any New York?
Ny fahazoan-dàlan'ny mpamboly ampiasain'ny olon-dehibe dia taratasy ara-dalàna manome alalana ny fahazoana, fananana, fizarana, ary fivarotana rongony avy amin'ny toerana nahazo alàlana ny mpamboly ampiasain'ny olon-dehibe azon'ireo manana fahazoan-dàlana ara-dalàna any amin'ny fanjakan'i New York.
Na izany aza, araka ny lalàna Marihuana Regulation and Taxation, ny New York State Board Cannabis Control dia mety hametraka fitsipika mamela ny tompon'ny fahazoan-dàlana hamboly marijuana hanao karazana fikarakarana kely indrindra nefa tsy mila fahazoan-dàlana hampiasaina ho an'ny lehibe.
Ny tompon'ny fahazoan-dàlana hitrandraka rongony dia avela nefa tsy ferana amin'ny fomba famokarana fambolena:
Araka ny lalàna, ny olona iray manana fahazoan-dàlana hitrandraka rongony dia mety hangataka fahazoan-dàlana iray fa tsy afaka mifidy fahazoan-dàlana hivarotra antsinjarany.
Ankoatr'izay, tsy misy manana fahazoan-dàlana mamboly rongony hanana tombony mivantana na ankolaka, ao anatin'izany ny fananana tahiry, ny talen'ny fifandraisana, ny fampindramambola na ny trosa, ny fananana manokana na ny fananana hafa, na amin'ny fomba hafa, amin'ny toerana rehetra mahazo alalana amin'ny fivarotana rongony ampiasain'ny olon-dehibe. dispensary na amin'ny orinasa manana fahazoan-dàlana ho toy ny dispensary fivarotana rongony rongony ampiasain'ny olon-dehibe na amin'ny fikambanana voasoratra anarana voasoratra mifanaraka amin'ny andininy fahatelo, § 34 amin'ny lalàna.
Ary koa, ny olona iray manana fahazoan-dàlana hamboly rongony dia tsy afaka manana fahazoan-dàlana hizara rongony na tsy manana fahazoan-dàlana mivantana na ankolaka na fanaraha-maso amin'ny fahazoan-dàlana mamboly olon-dehibe mihoatra ny iray.
FIVAVAHANA MISY: LISENY FAMPITANDREMANA Vaovao YORK
FIVAVAHANA MISY: LICENSE PROCESSORES PROSESORO FAHASALAMANA NEW YORK
Karazana fahazoan-dàlana amin'ny fambolena any New York
Lisansa fizaran-tsinjara mpaninjara ampiasain'ny olon-dehibe miasa ho an'ny olon-dehibe
Mametraka karazana fahazoan-dàlana hafa ihany koa ny lalàna, mitondra ny anarana hoe "Lisitra fisoratana anarana mpaninjara mpaninjara mampiasa olon-dehibe ho an'ny olon-dehibe". Ny tompon'ny iray amin'ireo fahazoan-dàlana ireo dia manana alalana sy fepetra mitovy amin'ny mpamboly ampiasain'ny olon-dehibe, ny fikirakira ny fampiasana olon-dehibe, ny mpaninjara ampiasana olon-dehibe ary ny fahazoan-dàlana hividianana olon-dehibe nomen'ny olon-dehibe mifanaraka amin'ny lalàna.
Na izany aza, ny varotra vokatra rongony sy rongony ampiasain'ny olon-dehibe voajanahary, novolavolaina na nozarain'ny fikambanana toy izany dia tsy maintsy voafetra ho an'ireo dispensary fivarotana ampiasain'ny olon-dehibe ho an'ny olon-dehibe ary ny toerana anaovana izany dispensaries ho an'ny olon-dehibe izany dia voafetra ho ao amin'ny toeram-pivarotan-kevitry ny fikambanana sy fotodrafitrasa nomena alalana araka ny andininy fahatelo amin'ny lalàna.
Ankoatr'izay, ireo fikambanana ireo dia tsy maintsy mitazona ny fahazoan-dàlana hitrandrahana rongony ara-pahasalamana ary manohy manolotra rongony rongony amin'ny ambaratonga napetraky ny fitsipiky ny birao.
Fahazoan-dàlana miasa ho an'ny olon-dehibe miasa ho an'ny orinasa
Farany, ny lalàna dia mametraka ny "Lisansa mpamboly voasoratra anarana", izay hanome fahazoan-dàlana sy fepetra mitovy amin'ny fahazoan-dàlan'ny mpamboly ampiasain'ny olon-dehibe, raha toa ka voafetra ho an'ny olon-dehibe manana fahazoan-dàlana ny fivarotana vokatra rongony sy rongony ampiasain'ny olon-dehibe. mampiasa processeur ary izany fahazoan-dàlana izany dia tsy mendrika ny fikambanana toy izany ho an'ny fahazoan-dàlana ampiasana olon-dehibe hafa.